गठन र अध्ययन २०१० मा उत्पन्न भएको साईट हो जुन यसको पाठकहरूलाई भर्खरको बारेमा जानकारी गराउनु हो समाचार, परिवर्तन र कलहरू शैक्षिक प्रणाली को। को विशाल बहुमत विपक्ष र विश्वविद्यालय र स्कूलका विषयहरू, कसरी विद्यार्थीहरूको लागि संसाधन र गाइडहरूको लागि विशेष नौकरशाही प्रक्रिया पूरा गर्ने बाट।
यी सबै सम्भव सम्पादकीय टोलीलाई धन्यबाद छ जुन तपाईं तल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं यस समूहको सदस्य हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। अर्कोतर्फ, भित्र यो पृष्ठ तपाईले यस शीर्षकमा वर्षौं बर्ष राखेका सबै शीर्षकहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, कोटी अनुसार क्रमबद्ध
स्नातक र नाभरा विश्वविद्यालयबाट दर्शनको डॉक्टर। Escuela D´Arte Formación मा कोचिंगमा विशेषज्ञ कोर्स। लेखन र दर्शन मेरो व्यावसायिक पेशाको हिस्सा हो। र नयाँ विषयहरूको अनुसन्धानबाट सिक्ने क्रम जारी राख्ने इच्छा, मसँग प्रत्येक दिन जान्छ।
सिक्ने ठाउँ लिदैन, तर यसको सट्टामा तपाइँ तपाइँ चाहनुभएको ठाउँमा हुन अनुमति दिन्छ। किनकि राम्रो प्रशिक्षणले तपाईंको सबै ढोका खोल्यो। अध्ययन गर्न ढिलो कहिले हुँदैन! यस कारणका लागि, FormaciónyEstudios मा हामी तपाईलाई राम्रो ज्ञानका साथ आफ्नो सबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएको चाहन्छौं।
म सँधै व्यावसायिक प्रशिक्षण र मार्गदर्शन (FOL) मा रुचि राख्छु र मेरो क्यारियरमा म यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा जाँदैछु। थप रूपमा, अध्ययन प्रविधिहरू सिक्नु भनेको मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा हो, विशेष गरी बच्चाहरूलाई सिकाउन।
Int 84 को भिन्टेज, एक नराम्रो सीट र बहु ​​स्वाद र शौकको साथ अस्वस्थ गधा। पाठ्यक्रमहरूमा अप-टु-डेट हुनु मेरो प्राथमिकता हो: तपाईले कहिल्यै सिक्न छाड्नु भएन। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ तपाइँको पढाई कसरी सुधार गर्ने? मेरो लेखहरूमा तपाईले धेरै सुझावहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन, म आशा गर्दछु, तपाइँलाई तपाइँको प्रशिक्षण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।